पर्वतका भण्डारी अमेरिकाको प्रतिनिधिसभा चुनावमा विजयी — Himali Sanchar
अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली मुलका ह्यारी भण्डारी विजयी भएका छन् । भण्डारी मेरील्याण्ड राज्यको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ८ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका हुन् । उनी डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हुन् ।
अमेरिका आएका नेपाली समुदायको इतिहासमा सबैभन्दा पहिला मूलधारको राजनीतिमा राज्य सांसदको रुपमा खाता खोल्न भण्डारी सफल भएका छन् । मुलुक बाहिर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश पाउने र सभासद बन्ने सम्भवत भण्डारी पहिला नेपाली मूलका हुन् ।
नेपालको पर्वत जिल्लाबाट सन् २००५ मा उनी अमेरिका आएका थिए । भण्डारी नेपालमा अंग्रेजी भाषा पढाउँथे । अमेरिकामा पनि उनी प्राध्यापन पेशामा नै संलग्न छन् ।
गत २६ जुन २०१८ मा भएको प्राथमिक चरणको निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक दलका तर्फबाट उनी दोश्रो स्थान हासिल गरी बिजयी बनेका थिए । उक्त प्राथमिक निर्वाचनमा मैदाना उत्रिएका ४ जना प्रतिस्पर्धीहरुमा एरिक ब्रोम्वेल पहिलो, भण्डारी दोश्रो र तेश्रो स्थानमा कार्लज्याक्स विजयी भएका थिए ।
गत प्राथमिक निर्वाचनमा खसेको २० हजार ७ सय २६ मतमध्ये भण्डारीले २८ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ९ सय ४१ मत ल्याएर दोस्रो भएका थिए । उक्त चुनाव क्षेत्र जिल्ला ८ मा रिपब्लिकन दलका उम्मेदवारले पाएको मत हेर्ने हो भने डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारको तुलनामा प्राथमिक निर्वाचनमा कम मत पाएको आँकडाले देखाएको थियो ।
यसैगरी न्यूह्याम्पशायरबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दिएकी राज्य डेमोक्र्याटिक दलकी उम्मेदवार मदलसा गुरुङ उपबिजेता बनेकी छन् । उनले २ हजार २ सय ९२ मत प्राप्त गरिन् । उनले बिजयी उम्मेदवारलाई बधाई पनि दिएकी छन् ।
झलनाथ र सुवासको जिल्ला इलाम उद्योग बाणिज्य संघमा कांग्रेसको पुरै प्यानल बिजयी
गौरादह खानेपानीको तात्यो चुनाबी माहौल : अघिअघि भण्डारी पछिपछि गौतम
सिन्धुपाल्चोकको निर्माण व्यावसायी संघमा मेयरका छोरा र वडाध्यक्षबीच प्रतिस्पर्धा
जाजरकोटको नेविसंघ अध्यक्षमा ललित बस्नेत निर्वाचित
बंगलादेशको आमनिर्वाचन : प्रधानमन्त्री हसिनाको अग्निपरीक्षा, रनभूल्लमा विपक्षी !
रास्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी : कम्युनिस्ट र समाजवाद चाहनेले अमेरिका छाडे हुन्छ !
१६ जुलाई, २०१९ : समाजवादी र साम्यवादीहरुलाई अमेरिका छाड्न चुनौति दिँदै गरेको ट्वीटले अमेरिकी राष्ट्रपति...
एनआरएनए कुवेतको पञ्जिकृत फारम शुल्क जुलाई १९ तारीख भित्र बुझाइसक्नु पर्ने
कुवेत, १६ जुलाई : छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि एनआरएनए एनसीसी कुवेतको पञ्जिकृत सदस्यता फारम भर्ने...
अवैध हतियार सङ्कलन !
रुकुमपूर्व, ३१ असार : जिल्लामा १५३ थान अवैध घरेलु भरुवा बन्दुक सङ्कलन गरिएको छ। आठ महीनाको...
कुलेखानी पूर्ण क्षमतामा चलाइयो
काठमाडौं, ३१ असार : इन्द्र सरोबरमा पानी भरिएपछि कुलेखानी जलविद्युत आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन थालिएको...
आज २०७६ साल असार ३१ गते मंगलबार, सन २०१९ जुलाई १६ तारीख
तपाईंको राशिफल : आज २०७६ असार २६ गते बिहीबार, सन २०१९ जुलाई ११ तारिख
तपाईंको राशिफल : आज २०७६ साल असार २९ गते आइतबार, सन २०१९ जुलाई १४ तारीख
तपाईंको राशिफल : आज २०७६ साल असार २७ गते शुक्रबार, सन २०१९ जुलाई १२ तारिख
तपाईंको राशिफल : आज २०७६ साल असार २५ गते बुधबार, सन २०१९ जुलाई १० तारीख
कुवेतमा फेरी अर्का एक नेपाली कामदारको मृत्यु
आज २०७६ साल असार २४ गते मंगलबार, सन २०१९ जुलाई ९ तारीख
सन्जिब ठकुरी र लक्ष्मी दर्नाल अभिनित “काले गुण्डा” बजारमा (भिडियो सहित)
तपाईंको राशिफल : आज २०७६ साल असार १८ गते बुधबार, सन २०१९ जुलाई ३ तारीख
रोशन हाङ्खिम राईको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
तपाईंको राशिफल : आज २०७६ साल असार २८ गते शनिबार, सन २०१९ जुलाई १३ तारीख